နာရေးကူညီမှုတွေလုပ်လို့ စန်း ကျတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ ရင်ထဲကစကားတွေမျှဝေလာတဲ့ ထွန်းကိုကိုနဲ့ ရွှေပိုးအိမ် - Cele Gabar
နိုင်ငံကျော်မင်းသားကြီးကျော်သူကိုယ်တိုင် နာရေးကူညီမှုအသင်းကြီးကို ဦးစီးတည်ထောင်ပြီး ကိုယ်တိုင်နာရေးပို့တဲ့အလုပ်ကို အစဉ်တစိုက်လုပ်ကိုင်လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ အနုပညာရှင်တချို့ပါ ဦးကျော်သူရဲ့အလုပ်မှာ ပါဝင်အားဖြည့်လာကြတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ အနုပညာရှင်တော်တော်များများ တစ်ရက်တာနာရေးကူညီမှုကုသိုလ်ယူတတ်ကြပေမယ့် အမြဲလိုလို ဦးကျော်သူနဲ့ တတွဲတွဲမြင်နေရသူတွေကတော့ ထွန်းကိုကိုနဲ့ ရွှေပိုးအိမ်တို့ပါ။သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေနဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းကြီးမှာ အားလပ်ချိန်တိုင်းလာရောက်ကူညီနေကြသူတွေဖြစ်ပြီး အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်ရင် စန်းကျတယ်လို့ ပြောဆိုနေမှုတွေအပေါ်မှာ။ ရင်ထဲကစကားတွေကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ” ပြောတာတော့ အစုံပဲပေါ့နော်.. ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာ စန်း ကျတယ်… ဘာညာအစုံပဲပေါ့နော်..ကျွန်တော်တို့က အဲ့ဒါတွေကို အယူမသီးပါဘူး..။ အဲ့လိုတွေယုံနေရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ ဒါတွေလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး.. ပြီးတော့ သင်္ချိုင်းမြေ မနင်းရဘူးတို့.. ဒီလို အနိဌာရုံတွေ နေ့တိုင်းမြင်နေရတာ.. ငိုကြွေးပူဆွေးတာတွေ. နေ့တိုင်းမြင်နေရတာ ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့. ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ နေ့စဉ်ဒါတွေမြင်နေရတာက သံဝေဂယူစရာပါပဲ..။ နေ့စဉ် ဒါလေးကို စိတ်နှလုံးသွင်းထားတော့ တရားကျပါတယ်” ဆိုပြီး ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ထွန်းကိုကိုကတော့ နာရေးကူညီမှုအသင်းမှာသာမက အရံမီးသတ်သမားအနေနဲ့ရော.. ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဖြန်းသူအနေနဲ့ပါ ပရဟိတအလုပ်တွေဆက်တိုက်လုပ်နေသူပါ။ ရွှေပိုးအိမ်ကလည်း မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် အခုလိုကာလမှာတောင် မကြောက်မလန့် နာရေးကူညီနေသူဖြစ်ပြီး။ ပရဟိတအလုပ်တွေအပေါ်ခံယူချက်ပြင်းထန်သူတွေမို့ ဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားထားတဲ့ သူတို့ရဲ့အင်တာဗျူးဗွီဒီယိုလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Source – Exclusive on Cele Gabar, Rainbow- CeleGabar
Posted in Cele NewsTagged Cele, Cele Gabar, Cele Myanmar, Celebrities, Celebrities Myanmar, Celebrity, Celebrity Myanmar, Htun KoKo, Myanmar Cele, Myanmar Celebrities, Myanmar Celebrity, Shwe Poe Eain, ဆယ်လီ, ဆယ်လီကမ္ဘာ, ဆယ်လီမြန်မာ, ထွန်းကိုကို, မြန်မာဆယ်လီ, ရွှေပိုးအိမ်
Previous post ရခိုင်ပြည်နယ်က ခက်ခဲနေတဲ့အိမ်ထောင်စုအတွက် မွေးနေ့အလှူ(၁၀)သိန်းလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ နေတိုး
Next post ဟိုတယ်မှာ Qဝင်နေတဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့အတူ Lock Down ချတဲ့အကြောင်းကို အခွီရိုက်ကူးထားတဲ့ ကိုပေါက်